Disclaimer | Best Way to whiten Ezé Guide
N'ihe ọmụma ndị dị na nke a website bụ maka ozi izugbe naanị ebumnuche. The ọmụma na-nyere site anyị na saịtị na mgbe anyị na-agbalị na-ọmụma ruo ụbọchị na ezi na, anyị na-eme ọ dịghị ihe oyiyi ma ọ bụ warranties of any kind, egosipụta ma ọ bụ echiche, banyere izu ezu, ziri ezi, pụrụ ịdabere, kwesịrị ekwesị ma ọ bụ nnweta na-akwanyere ndị website ma ọ bụ ndị ọmụma, ngwaahịa, ọrụ, ma ọ bụ yiri ndịna ẹdude ke website maka ihe ọ bụla nzube. Ọ bụla tụkwasịrị ị na-edebe on ọmụma dị otú ahụ bụ ya mere nnọọ na gị onwe gị n'ihe ize ndụ.
Na ọ dịghị ihe omume ndị anyị ga-atụba maka ọ bụla ọnwụ ma ọ bụ mmebi gụnyere enweghị mmachi, apụtachaghị ìhè ma ọ bụ ndị dị na ọnwụ ma ọ bụ mmebi, ma ọ bụ ihe ọ bụla na ọnwụ ma ọ bụ mmebi bụla ịda site ọnwụ nke data ma ọ bụ uru ịda si, ma ọ bụ na njikọ na, na ojiji nke a website.
Site na nke a website i nwere ike ejikọta ndị ọzọ weebụsaịtị nke ndị nọ n'okpuru anyị na saịtị. Anyị na-apụghị ịgbanwe ọdịdị, ọdịnaya na nnweta nke saịtị ndị ahụ. Nsonye nke ọ bụla njikọ adịchaghị enye echiche a nkwanye ma ọ bụ akwado ụdị echiche owụt n'ime ha.
Mgbalị nile e mere na-website elu na-agba ọsọ were were. Otú ọ dị, anyị na saịtị na-ewe ibu ọrụ ọ bụla maka, na-agaghị dara iwu maka, website ịbụ nwa oge dịghịzi adị ruru ka oru okwu karịrị anyị.